चीनतिरको नाका दिर्घकालिन रुपमा तत्काल खुल्छ :मन्त्री पुन - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रकाशित मिति: ९ कार्तिक २०७२, सोमबार October 26, 2015
इन्धन जस्तो महत्वपुर्ण वस्तुको आपुर्तिमा भारतसँग कायम रहेको एकाधिकार तोडेर सरकारले वर्तमान अवस्थाको आँकलन गरी तत्काल उत्तरी नाकाहरुबाट समेत पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको आपुर्ति गर्र्ने तयारी गरेको छ ।त्यसै गरी चीन सरकारले नेपालप्रति देखाएको प्रशंसनीय सदासयता लगायतको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर नेपाल सरकारका वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले असनेपाल न्युज संवाददातासँग गर्नु भएको कुराकानि ।
निकै लामो समयदेखि इन्धनको आपुर्तिमा अप्पठ्यारो परिस्थिति जारी रहेको छ, नेपाल–चीन नाका केरुङबाट आपुर्ति व्यवस्था मिलाउने प्रयास कहिले सम्म सफल होला ?
हामीले औपचारिक रुपमा चिठ्ठी र वार्ता टोली पनि निर्माण गरिसकेका छौ ।त्यो टोली तुरुन्तै चीन गएर त्यसको केहि दिनमा यसले सबै विषयमाथि अध्ययन गर्नेछ । यहि दिन सम्म हुन्छ भनेर तोक्न नसके पनि छिटो भन्दा छिटो इन्धन भित्रयाउने प्रयासमा छौ । नेपाल र चीन दुवै देशबाटै यो प्रयास भइराखेकोले गर्दा यो प्रयास छिट्टै सफल हुनेछ ।
वार्ता टोली गठन पनि भइसक्यो, चीन–नेपाल राजदुत संयोजकत्वको टोलीले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ । तर केरुङ नाकाबाट बिस्तारै बाटो सुचारु हुँदैछ । ढुवानीको लागि याहाँको बाटोको कारण कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन ?
केरुङको नाकासम्म हाम्रो एक टोली गएर निरिक्षण गरिसकेको छ । यतिबेला यो बाटो सुचारु गर्न कुनै समस्या छैन । चीन सरकारको पनि रिपोर्टहरु सबै हेर्दाखेरि अहिले तत्कालमा हामी यसलाई सुचारु गर्न सक्छौ । बरु यसको लागि यातायात रुढ सुरक्षा लगायतको कामहरु गर्नु पर्ने आवश्यक्ता भने पर्दछ ।रुढलाई चाहि कसरी स्ट्यान बाइ राख्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न रसुवा लगायत जिल्लाहरुका स्थानीय प्रशासनमार्फत पनि हेरिरहेका छौ । बाटो ठिक छ बरु अझ बाटो निर्माण गर्नको लागि बनाउने निर्माण सामग्रीहरु स्ट्यानबाइ राखेर बनाउदै लान सक्छौ । यस बाटोबाट यातायात सुचारु गर्न कुनै समस्या नअनाउने अवस्था छ ।
आपतकालिन समयमा मात्र नभएर दिर्घकालिन रुपमा काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचाई चीनिया पक्षको देखिन्छ ।उनीहरुको नेपालको तर्फबाट स्पष्ट जवाफ खोजेका छन्। यस पटक चाहि गम्भिर तरिकाले कुरा अघि बढाउनु भएको छ त ?
हामी यस बिषयमा स्प्रष्ट र गम्भिर तरिकाले अघि बढेका छौ । एउटा भू–परिवेष्ठित मुलुकले पाउनु पर्ने पारवहनको सुविधा, बाटोघाटोको सुविधा, त्यस्तै अन्य सुविधा पनि हामी उपभोग गर्न चाहन्छौ । खासगरी अहिलेकै अवस्थामा हेर्दा चीनसँग एउटा निश्चित प्रतिशत व्यापारिक तहमा नै खरिद गर्नको निम्ति हामीले प्रस्ताव गरेका छौ र त्यो प्रस्ताव सकारात्मक पाएका छौ । त्यसैले बाँकी धेरै कार्य गर्ने कुरामा हामी पुगिसकेका हुनाले भोली पनि हामीलाई यस्तो खालको समस्या नपरोस भनेर दिर्घकालिन योजना बनाएका छौ । हाम्रा नाकाहरु खोलिनु पर्छ । राजनीतिक कारणको मात्र कुरा होइन विभिन्न कारणहरु जस्तो प्राकृतिक प्रकोप लगायतका कारणहरु नाकामा आउन सक्छ । कतै न कतै कुनै पनि समस्या आउन सक्छ । एकातिरको नाकामा समस्या भए अर्को कतैतिरबाट खुलाउने स्थिति हुनुपर्छ भनेर हामी दिर्घकालिन हिसाबले पनि लागेका छौ । र तत्कालिक हिसाबले पनि लागेका छौ र तत्कालिक हिसाबले त झन हामीलाई इन्धनको प्रयोग विना बाँच्नै मुस्किल परेको छ । त्यसकारणले गर्दा यो विकल्प तत्कालिक हिसाबले सोच्नु पर्छ । दिर्घकालिन हिसाबले यो योजना सुरु गर्न चाहन्छौ ।
परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको भारत भ्रमणपछि उहाँले प्रतिक्रिया दिनु भए अनुसार भारतबाट इन्धन आयात हुने कुरा सहज हुन्छ भनेर आशा गरिएको थियो । तर त्यो भएन यतिबेला कत्तिको इन्धन आइरहेको छ त ?
त्यतिबेला भारतीय पक्षले सैद्धान्तिक हिसाबले परराष्ट्रमन्त्रीसँग सहमति भएको थियो । उपराष्ट्रमन्त्री फर्कनु भएपछि वाणिज्य आपुर्ति मन्त्रालयको सचिब सहित हामी बसेर छलफल गर्यौ । सहमति भए अनुसार व्यावहारिक हिसाबले परिणाम देखापरेको छैन ।फेरी पनि कोशिस चाहि हुँदैछ । रक्सोल बाहेकका अरु नाकाबाट डाइभर्ट गरेर वैकल्पिक स्थानबाट भित्र्याउने गरी अरु संभव उपायहरु खोजेका छौ । हामीले कुटनीति%9
हाम्रो नँया अभ्यासले नीजि बिद्यायल र सामूदायिक बिद्यालयबीच एकरुपता आउछ :निर्देशक पौडेल
सामुदायिक बिद्यालयमा अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीले पनि अब रंगिन पुस्तक पढ्न पाउने र यसले गर्दा नीजि बिद्यालयका […]
सबैलाई समान बनाउने कडी ‘अवसर” नै होः महावाणिज्यदूत खड्का
अष्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्सका लागि महावाणिज्यदूत दीपक खड्कासँग भूकम्प पछि नेपालको अवस्था, पुनर्निमाण […]
“संघीय प्रणालीलाई जनताले नै खारेज गर्नु पर्छ”: अध्यक्ष केसी
संविधान सभाबाट ८ बर्ष सम्म संविधान बन्न नसकेको अवस्थामा प्रमुख चार दलबीच जेठ २५ गते भएको १६ बुँधे सहमतिले […]